Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Xummada Safarka ee Hong Kong
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Xummada Safarka ee Hong Kong
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Wararka Hong Kong • Wararka Singapore • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dowladaha Hong Kong iyo Singapore waxay ku jireen wadahadal buuxa oo ku saabsan xumbada safarka hawada ee labada dal. Xumbadu waxay kor u qaadeysaa xayiraadaha karantiilka si safarka loo sahlo wax walbana si tartiib tartiib ah ay u soo fiicnaadaan.
In kasta oo wadahadalkan uu socday in muddo ah, haddana arrimuhu way yaraadeen intii u dhaxeysay markii uu si aad ah u kordhay kiisaska coronavirus ee Hong Kong. Markay arrimuhu bilaabmayaan inay sii fiicnaadaan, xumbada safarka hawadu waxay ku soo laabatay miiska, faahfaahintoodana waxaa lagu dhawaaqi doonaa muddo gaaban.
Guddiga Dalxiiska ee Hong Kong, oo ah hay'ad hoos timaada Xafiiska Ganacsiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee magaalada, ayaa soo saaray bayaan in inkasta oo xumbada safarka hawadu ay dib u dhacday cudurka ka dillaacay ee Hong Kong, haddana dawladaha labada magaalo “waxay ka wada hadlayeen arintan. ”
“Cudurka cusub ee coronavirus ayaa laga yaabaa inuusan meesha ka bixin, waana inaan baranno sida loola noolaado oo aan ula jaanqaadno waxyaabaha cusub ee caadiga ah. Dadweynaha waa inay u diyaar garoobaan in meelaha yar-yar ee ka dilaaca deegaanka ay lama huraan tahay waqti ka waqti. Tallaabooyinka kala fogaynta bulshada ayaa laga yaabaa inay u baahan tahay in la adkeeyo mararka qaarkood, ayay tidhi.
Kuwii qorsheynayay inay safraan ama qorshooyin aan sugnayn hawo awgood, xayiraadaha safarka ayaa ugu dambeyn ku farxi kara. Marka kahor intaysan arintu bilaaban inay kululaadaan, aan kuu sheego dhamaan waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato xumbada safarka hawada ee dhowaan la soo bandhigay, waxa ay qabato, sida ay kuu anfacayso, iyo talaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado si aad si nabad ah ugu duusho. Marka, adoon dheereynin, aan sii wadno.
Maxaa Loo Doortaa Labadan Dal?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad tixgeliso waa waxa gaarka u ah Hong Kong iyo Singapore ee labada dalba ay go'aansadeen in laga qaado xayiraadda safarka. Si ka duwan inta badan dalalka kale ee adduunka, Hong Kong iyo Singapore labaduba waxay leeyihiin guul isku mid ah oo ay ku jiraan coronavirus.
Tallaabooyinka ay qaadeen labadooda dalba waxay xaqiijinayaan in uusan jirin cudur weyn oo ka dillaacay aafada. In kasta oo Singabuur ay horey ula lahayd dalal kale safarro, haddana ma aysan oggolaan soo-booqashada martida si safar tamashle ah.
Wadashaqeyntan lala yeelanayo Hong Kong waa mid ka mid ah nooceeda iyada oo socdaalayaashu ay si fudud uga heli karaan fiisooyinka labada dal oo ay u safri karaan baashaal. Go'aanka waxaa la qaatay ka dib markii si taxaddar leh loo tixgeliyey loona darsay xogta la xiriirta tirada yar ee kiisaska coronavirus ee labada dal.
Si kastaba ha noqotee, xumbada safarka hawadu ma dammaanad qaadayso wax kasta maadaama xaddidaadaha la dhigi karo wakhti kasta. Sida laga soo xigtay Ong Ye Kung, wasiirka gaadiidka ee Singapore, xumbada safarku waxay gebi ahaanba kuxirantahay xogta waqtiga dhabta ah. Isla marka kiisasku bilaabaan inay kacaan, xumbada isla markiiba waa la joojinayaa.
Yey Ku Safri Kartaa Xumbada?
Sababta ay xumbo hawadu waxtar ugu leedahay waxa ay qabato ayaa ah inay leedahay shuruudo qaas ah. Qof kasta oo sii joogay Hong Kong ama Singapore 14-kii maalmood ee la soo dhaafay wuxuu u safri karaa kana soo noqon karaa waddanka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa loo oggolaan doonaa oo keliya haddii ay soo bandhigi karaan baaritaanka PCR-ga ee xun ee la qabtay ugu yaraan 72 saacadood kahor bixitaanka. Marka, haddii aad rabto inaad u safarto ama aad ka soo safarto Hong Kong iyo Singapore, waa inaad haysataa tijaabada PCR.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad dalbataa Passport Safarka Diyaaradda oo aad ballansataa suuq duulimaad xumbada si gaar ah loogu talagalay oo leh calaamadda xumbada oo ay weheliso fiisaha dal ku galkaaga Waa inaad soo gudbisaa cadeyntaada caafimaad kahor bixitaanka iyo imaatinka kadib, taas oo si fudud looga samayn karo moobaylkaaga.
Diyaaraddee Aaad U Adeegsan Kartaa Safarka?
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad fahamto ayaa ah in labada dalba ay u oggolaadeen kaliya rakaabka inay ku safraan dhowr shirkado diyaaradeed oo gaar ah. Markaa kahor intaadan jarin tigidhkaaga, waa inaad fiirisaa bal in shirkadda duulimaad ee aad dooratay ay bixinayso ikhtiyaarka xumbo safarka hawada ah iyo in kale.
Hadaad raadineyso diyaarad bixinaysa Xumbada Safarka ee Hong Kong Singapore, waxaad gujin kartaa xiriirka. Cathay Pacific ayaa wada duulimaadyo talantaalli ah oo isaga kala goosha labada dal, waxaadna si fudud ugu safri kartaa dhib la’aan aan loo baahnayn.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira waxqabadyo yar oo la xiriira inta rakaab ee loo oggol yahay inay safraan. Dowlada Hong Kong ayaa keliya ogolaansho siisay 200 oo rakaab ah maalintii, taas oo ka dhigaysa helitaanka duulimaadyada ugu fiican xoogaa adag. Si kastaba ha noqotee, markii xaaladdu hagaagto, xadka waxaa loo kordhin doonaa 400 oo rakaab ah maalintii.
Sidee Imtixaannada Loo Qaadaa?
Haddii aad ka soo duuleyso Hong Kong una socoto Singapore, waxaad u baahan tahay oo keliya in hal jeer lagaa baaro taasoo ah 72 saacadood ka hor safarkaaga. Markaad ka degto Singapore, uma baahnid inaad marto tijaabo kale oo PCR ah garoonka diyaaradaha.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ka safarto Singapore oo aad u tagto Hong Kong, waxaa jira xayiraad intaa ka badan. Dusha sare ee helitaanka jeegga hore ee PCR qiyaastii 72 saacadood ka hor duulimaadkaaga, waxaad u baahan tahay inaad hesho baaritaan kale oo PCR ah ka dib markaad ka degto garoonka diyaaradaha ee Hong Kong.
Imtixaanka iyo natiijooyinka waxay qaadanayaan ku dhowaad afar saacadood, rakaabkuna waa inay sugaan. In kasta oo dowladda Hong Kong ay ka shaqeyneyso tijaabo cusub oo qaadata 30 daqiiqo si natiijada u timaado, arrimuhu wali waxay ku jiraan howsha tijaabada waxaana laga yaabaa inay waqti badan qaadato.
Immisa waddan oo kale ayaan u safri karaa iyaga oo xumbada dhex jooga?
Waa inaad xusuusataa in xumbadaani ay khuseyso oo keliya haddii aad u safreyso inta u dhexeysa Singapore iyo Hong Kong. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka imaaneyso waddan kale oo aad rabto inaad aado Hong Kong iyo Singapore dhexdeeda xumbo, weli waad sameyn kartaa haddii aad hoggaansameyso siyaasadaha.
Waxaad u baahan tahay inaad buuxiso dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka oo ay weheliso ugu yaraan muddada joogitaanka ee 14 maalmood taas oo kuu oggolaaneysa raaxada safarka xumbada dhexdeeda. Haddii safrayaashu wali helaan coronavirus inta ay duulimaadka socdaan, dowladda ay u socoto ayaa bixin doonta kharash buuxa oo ay la tacaali doontaa daaweynta.